Sidee loo doortaa Xirmada Cirbaddaada?
Cirbadee / cirbadee ayaan ubaahanahay? Ujeedada maqaalkani waa inay kaa caawiso inaad doorato baakad ku habboon mashruucaaga muditaanka kiimikada. Xirmooyinka cirbadeynta ayaa ah isku xirka ka dhexeeya mashiinka cirbadeynta iyo walxaha qaab dhismeedka duritaanka kiimikooyin kala duwan oo dabool ah, oo ay ku jiraan cusbada epoxy ...
Xalka Xirmooyinka Cirbadaha ee Dhismaha Dhulka
Soo ogow farqiga u dhexeeya duritaanka iyo nidaamka duritaanka ee dhismaha dhulka hoostiisa. Waxay ka caawineysaa in la doorto maaddada saxda ah ee loogu talagalay xaaladda saxda ah ee wajiga naqshadeynta. Cirbadeynta waxaa lagu qeexi karaa inay tahay soo bandhigida walxaha la cadaadiyey ee dhulka ama qaab dhismeedka waterpr ...
6 Xeerarka Aasaasiga Ah Ee Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka
Ku rakib bambo cusub oo bartamaha Ka dib markaad si taxaddar leh u xulato cabbirka iyo qalabka ku habboon, hubi inaad si sax ah u rakibto bamka cusub si loo hubiyo rakibo guul leh. Waxaa muhiim ah in salka loo dhigo si sax ah oo la waafajiyo mashiinka mashiinka la isku duro. Waxa kale oo aad muhiim u ah in la dhammaystiro p ...
Cabbiraadda Waxtarka Grouting Kiimikada
Sawirka kuleylka ee infrared: qiimeyn dhakhso leh oo lagu kalsoonaan karo ee kiimikada qashin dhismeedka shucaaca kiimikada ayaa ah mid ka mid ah hababka caadiga ah ee lagu dayactiro dildilaaca iyo gelitaanka biyaha ee dhismayaasha shubka ah Tijaabinta aan duuliyaha lahayn Yareynta faragelinta dhismayaasha la taaban karo marka la sameynayo ...
Goorma Ayaa Polyurethane Grouting Uu Yahay Xalka Dayactirka Waxtarka Leh?
Codsiga wakiilka qashinka ee polyurethane ee cufnaanta carrada iyo dib u soo celinta qaabdhismeedka ayaa gebi ahaanba beddeleysa habka maamulayaasha howlaha guud iyo maareeyayaasha dhismaha ay uga fekeraan dib u soo celinta iyo beddelidda. Sababtoo ah kharash-ku-oolnimada iyo hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda duritaanka, feasibilit ...
Sida loo Xulo Xirmada Cirbadeynta
Xirmooyinka cirbadeynta ayaa ah isku xirka ka dhexeeya mashiinka cirbadeynta iyo walxaha qaabdhismeedka ee lagu durayo kiimikooyin kala duwan oo dabool ah, oo ay ku jiraan epoxy resin (EP), polyurethane (PU / PUR / SPUR), polyurea, acrylic gel, biyo firfircoon Xumbo, siloxane, alaabooyin silikoonaysan , microemulsion, xoqan, c ...
Sida Loo Helo Labada Lamaane ee Dufanka Dhirta Oo dhameystiran
Waa xaqiiqo la wada ogyahay in duudaynta saliida iyo duubabku ay badbaadin karaan wax badan oo duug ah. Yaraynta fashilka iyo dayactirka qaaliga ah waa hawl aad muhiim u ah, laakiin way fududahay in la iska indhatiro! Halkan waxaa ku yaal tilmaamo kaa badbaadin kara lacag iyo waqti badan. 1. Sifeynta Virtual: Weligaa maku fikirtay tha ...
Calaamadaha Cadaadiska Cadaadiska Cadaadiska ee saarida
Mashiinka naaftada ah ee kacsan ama aan haba yaraatee waxaa sababi kara dhibaatooyin gaarsiinta cadaadiska sare. Inta badan matoorada naaftada ee casriga ahi waxay leeyihiin nidaamyo elektiroonig ah oo lagu xakameeyo nidaamyada cadaadiska sarreeya. Nidaamyada cadaadiska sare ee gaboobay ayaa isticmaalay mashiinka mashiinka cadaadiska sare. Dhibaatooyinka gaarsiinta cadaadiska sare waxay sababi karaan awood hoose, rou ...
Rakibidda Cadaadiska Cadaadiska Sare iyo Qalabka
Rakibidda Cadaadiska Sare ee Cadaadiska (ama ibta dufanka, Qalabka Zerk, xirmooyinka dufanka, Qalabka Alemite, Zerk) waa dhibco lagu nadiifiyo nidaamka farsamada, dufanka waxaa lagu dari karaa qoriga dufanka. Adiga oo cadaadis ku saaraya qalabka wax lagu dhejiyo ee ku habboon, dufanka ayaa ku qulqulaya qolka saliidda ...
Polyurethane miyuu sameeyaa alwaax biyeed?
Maya, polyurethane ma sameyn karto alwaax adag oo biyuhu xireen, laakiin waxay ka dhigi karaan alwaaxda biyo-diid. Polyurethane waxay difaac u tahay dhirta adag. Way celin kartaa biyaha waxayna ka hortagi kartaa nuugista biyaha, laakiin waligeed gabi ahaanba isma hor taagi doonto biyaha, sidaa darteed waligeed ka dhigi mayso 100% biyo la'aan. Polyurethane sidoo kale way ilaalin kartaa woo ...
Qalabka Cadaadiska Cadaadiska Sare ee Qalabka - Grouting Packer
1. Waa maxay Cirbadaha Cirbadaha Xirfadlayaasha grouting, oo sidoo kale loo yaqaan 'nozzles grouting', ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa dhowrista biyaha iyo tamarta korontada, tunelada, dowladda hoose, dhismaha warshadaha iyo madaniga iyo qeybaha kale, gaar ahaan qeybta ka shaqeynta kiimikada la taaban karo. Waa qaybta ugu weyn ee pre-pre ...
Fahamka Qiimeynta Dahaarka Dahaarka Biyuhu Ka Dagan Tahay Teendhada
Soo-saare kastaa wuxuu leeyahay dariiq u gaar ah oo uu teendhooyinka uga sameeyo biyo-diid, UV u adkaysata iyo neefsasho isku mar. Qiimaynta biyuhu ee maaddadu waxay ku jirtaa milimitir, taas oo ah qeexitaanka aad raadineyso markaad isbarbar dhigayso teendhooyinka. Lambarku wuxuu u dhexeeyaa 800 mm ilaa 10,000 mm. Lambarku wuxuu tilmaamayaa ...